MINGALABAR, Hello & Welcome to the November edition of GOING WILD.
Last month I mentioned that the planning of some GOING WILD activities was underway withaview to enable our readers and contributors to have an opportunity to get acquainted and spend some time together discovering our surroundings.
I can now announce that the first of these will be an early morning Pond Netting Session held at Pun Hlaing Estate on Saturday November 23rd at 7:00am.
The meeting point will be the new Going Wild Garden Cafe which is opening on Wednesday 23rd October next to the Country Store, complimentary teas and coffees will be made available to all the early risers who wish to join in.
ပြီးခဲ့တဲ့ လ စာ​ရေးသူ ​ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း စာဖတ်သူတို့ကို "Going Wild" November အစီအစဥ်တွင် သဘာ၀နှင့်အနီးစပ်ဆုံး​လေ့လာ​တွေ့ဆုံနိုင်ရန်အစီအစဥ်​ပြုလုပ်ထည့်သွင်း​ပေးထားပါတယ် ။ အစီအစဥ် Pond Netting Session ကို နို၀င်ဘာလ ၂၃ရက်​နေ၊ မနက် ၇ နာရီ တွင် Going Wild Garden Cafe, Country Store ​ဘေး ၌ ​​​​တွေ့ ဆုံရန် စီစဥ်ထားပါသည်။ အခမဲ့ Coffee နှင့် Tea ကို အစီစဥ်ထဲတွင် အရင်​ရောက်ရှိသူ​ အတွက် ထည့်တွင်း​ပေးထားပါသည်။
Many thanks to Dylan Rae for providing us with this months cover photograph of the above Lotus Flower which he witnessed in full bloom during his workday at StarCity.
Besides being such an attractive flower the Lotus is highly regarded as being symbolic of purity, honour, good luck & wellbeing and many readers will already have an understanding of the cultural and religious significance they have in this part of the world. The feeling of serenity experienced just from gazing at its image makes it easy to understand why.
ကြာပန်း Lotus Flower က​တော့ သန့်စင်ခြင်း၊ ဂုဏ်ကြက်သ​ရေရှိခြင်း၊ ကံ​ကောင်းခြင်း နှင့် ကျန်းမာခြင်း တို့ကိုကိုယ်စားပြုပါသည်။ ကြီးမြတ်​သော ဘာသာ​ရေး နှင့် ယဥ်​ကျေးမှု တို့ကိုလည် ကိုယ်စားပြု အ​လေးအမြတ်ထားရ​သောပန်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဓာတ်ပုံပေးပို့ခြင်းအတွက် Star City မှ Dylan Rae အားကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Continuing the theme, good friend of GOING WILD and YOMA Group Ambassador Mr Mark Tippetts thoughtfully sent in these extremely interesting pictures which were taken during his recent trip to Seoul, South Korea.
Jogyesa Temple is the chief temple of the Jogye Order of Korean Buddhism and was first established in 1395, the dawn of the Josean Dynasty.
The lush, green trees & vivid flowers shown are currently enhancing the grounds of the temple in their full, resplendent glory.
Should any other readers happen to notice anything nature related during their holidays or business travels which they feel would be of interest please send them in and we can make thisaregular feature.
Jogyesa Temple ပုံကိုတော့ YOMA Group ရဲ့ သံအမတ် Mr Mark Tippetts က သူ Seoul, South Korea တွင်​ရိုက်ခဲ့တဲ့စိတ်၀င်စားစရာ အလှပုံများကို​​​ စာဖတ်သူတို့အတွက် ​​​ဝေမျှထားပါသည်။ Jogyesa Temple ကို ၁၃၉၅ ခုနစ်တွင်သည်​​ဆောက်ထားပြီ ကိုရီးရာ ဗုဒ္ဓ ဘာသာ များအတွက် အထင်ကရ ​ဘုရား​ကျောင်း​ဆောင် တစ်​ဆောင်ဖြစ်သည်။ စိန်းလန်းစို​ပြေ​​သော သစ်ပင်များနှင့် ထင်ရှား​သောပန်းများက Jogyesa Temple ကြီးရဲ့အလှကို​ပေါ်လွင်​စေသည်။ စာဖတ်သူတို့လည်း သင်တို့၏ ခရီးစဥ် မှတ်တမ်းများနှင့် အ​တွေ့အကြုံတို့ကိုလည်​ပေးပို့၍ထည့်တွင်းနိုင်ပါတယ်။
Michelle sent me this picture of an Oleander Hawk Moth which she noticed perched on her office door at Pun Hlaing Estate.
These moths are usually inactive during the daytime so are rarely seen, preferring instead to feed at dusk on the nectar of the scented flowers of plants such as honeysuckle, petunia and jasmine.
Oleander Hawk Moth ပုံကို Michelle က Pun Hlaing Estate ရုံးတံခါးဝတွင် သတိပြုမိ ပြီး ကျွန်ုပ်ထံပို့ပေးခဲ့ ပါတယ်။ ဒီဖိုးဖလံ ​လေး​တွေက​နေ့ဖက်​တွေမှာ​တွေ့ရခဲပါတယ်။ သူတို့က​တော့ honeysuckle, petunia and jasmine အစရှိသည်အပင်များ ၏ ပန်း၀တ်မုံ အ​ပေါ် မှီခိုလျှက်ရှိပါသည်။
Purely by coincidence this Oleander Hawk Moth Caterpillar was spotted by well known Pun Hlaing resident, Martin Weiss, chomping its way through one of his treasured plants.
Although often overlooked or considered pests caterpillars can be very interesting in their own right.
What makes this one special is that its only source of food are the leaves of the Oleander bush which are toxic in various degrees to most other animals when consumed.
They also haveabright blue spot on either side of their head which act asafalse pair of menacing eyes and they often use these asadefence mechanism to effectively frighten away predators.
Click on the video below to see this little guy in action.
Caterpillar ခူကောင် ကို ပန်းလှိုင်အိမ်ရာမှာနေထိုင်သူတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ Martin Weiss ကသူတန်ဖိုးထားတဲ့ အပင်တွေထဲက တစ်ပင်ကို Caterpillar ကဝါးမြိုနေတာ ကိုတွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ သေချာကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုရင် Caterpillars တွေကတစ်နည်းတစ်ဖုံသူ့ဟာနဲ့သူ စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ သတ္တဝါလေးဖြစ်နေတာ တွေ့ရပါတယ်။ သူတို့ခေါင်းရဲ့ တစ်ဖက်တစ်ချက်မှာ တောက်ပပြီး အပြာရောင်အစက်ကလေးလို့ ထင်မှားရလောက်တဲ့ အန္တရာယ်ရှိစေတဲ့ မျက်လုံးတစ်စုံရှိပါတယ်။ သူတို့ဟာ ထို မျက်လုံးတစ်စုံကို တခြားလာနှောက်ယှက်တဲ့ သတ္တဝါတွေကို ခြောက်လှန့် ရာမှာ ခုခံပစ္စည်းအနေနဲ့ အသုံးပြုလေ့ရှိကြပါသည်။
Another Pun Hlaing resident and keen photographer, Arti Maholtra, kindly submitted this beautiful image ofaBarn owl which she was fortunate enough to encounter in her garden.
Although some owl species are active during daylight hours Barn Owls are predominantly nocturnal, however at this time of year it’s quite likely that they have paired up and are feeding owlets in the nests which they construct in the hollows of trees.
These additional duties mean that they need to continue hunting prey well into the morning to feed their hungry offspring, especially if there has been overnight rain which prevents them from flying.
ဒီ Barn Owl ဇီးကွက်ပုံ​လေးက​တော့ ပန်းလှိုင်အိမ်ရာမှာနေထိုင်သူ Arti Maholtra မှ​​ပေးပို့ထားပါသည်။ Barn Owl အချို့ ဇီးကွက် မျိုးစိတ်​တွေက​နေ့ အချိန်တွေမှာအပြင်ထွက်တတ်​သော်လည် barn owl အများစုကည အချိန်ထွက်​​လေ့ရှိပါသည်။ သို့​သော် ဤအချိန်တွင် ၎င်းတို့သည် သစ်ပင်များ၏အ​ခေါင်းအ​ပေါက်တွင် အသိုက်များ​ဆောက်ပြီး ၎င်းတို့၏က​လေးများအတွက်အစားရှာထွက်ရသည်။ အချို့ည​တွေမှာမိုးကြီး​သော​ကြောင့် ပျံသန်းရန်အခက်အခဲ​ကြောင့်အစာရှာရန်မလွယ်ကူ​သော ကြောင့် ၎င်းတို့သည်​ နေ့ ဖက်တွင် ၎င်းတို့၏က​လေးများကို အစာ​ကျွေးရန် ဆက်လက် အစာရှာ​ဖွေ​​နေရပါသည်။
Failing to disappoint, Uncle Potato has been busy with the watercolours again, sending in these two paintings and providingadescription of his illustrations:
"The black kites always return to Yangon at the end of the monsoon. They come to breed and in between riding the thermals above the towers at StarCity they have been trying to find nest sites in the bigger trees on the golf course. Huge and dark withadistinctive V tail and big finger like feathers they are slow and majestic hunters. This brings them into the space of the crows who live up to their collective pronoun. A murder of crows attack the pairs of kites and chase them off to the western edges of the course.”
Black kites စွန်နက် ကို Uncle Potato က​တော့ သူရဲ ​ရေ​ဆေးပန်းချီနှစ်ခုကိုအနက်အဓိပ္ပါယ် နှင့်တစ်ကွ​ပေးပို့ခဲသည် ။ စွန်နက်တွေဟာ အမြဲတမ်း မုတ်သုံရာသီကုန်ခါနီးအချိန်ဆို ရန်ကုန်ကို ပြန်လာတတ်ကြတယ် ။ သူတို့ လာပြီး မွေးဖွားဖို့အတွက် StarCity towers တွေရဲ့ အပေါ်ကနေပြီး Golf course တွေထဲကအကြီးဆုံးသစ်ပင်ကို ရှာကာ အသိုက်ဆောက်ဖို့ ပြင်ဆင်နေကြတယ်။ ကြီးမားမည်းနက်ပြီး V ပုံသဏ္ဌာန် ထင်ရှားတဲ့ အမြှီး နဲ့ လက်ချောင်းပုံစံ အမွှေးတွေရှိပြီး သူတို့ဟာ နှေးနှေးနဲ့ခမ်းနားထည်ဝါတဲ့ အမဲလိုက်သူတွေဖြစ်တယ်။ ကျီးကန်းအုပ်ကြီးကလည်း သူတို့နေရာကို လာယူတယ်ဆိုပြီး စွန်နက်တွေကို အနောက်စွန်း ဖက်ထိလိုက်လံတိုက်ခိုက်ကြတယ်။
“Known in many parts of the world as butcher birds because they like to impale their prey such as big insects, small frogs and lizards on thorns and barbed wire, shrikes are expert hunters that look pretty harmless. The Burmese shrike is very handsome and lives at both Star City and Pun Hlaing, where they are most easily spotted during the hot part of the day when they sit patiently while the world dozes.”
ကမ္ဘာအနှံ့အပြားတွင် Burmese Shrike (ငှက်ဘီလူး) အမဲလိုက်ငှက်များဟုအမည်တွင်ပြီး သူတို့ဟာ အ​ကောင်ကြီး​သော အင်းဆက်ပိုးများ၊ ဖားငယ်များ နှင့် ပုတ်သင်ညိုများကိုစား​လေ့ရှိသည်။ ကျွမ်းကျင်​သောအမဲလိုက် မုဆိုးများဖြစ်​သော်လည်း သူတို့က ချစ်စရာအန္တရာယ်ကင်းပုံရသည်။ ၎င်းငှက်တို့ သည် Pun Hlaing and Star City တို့တွင်​တွေ့ရှိ နိုင်ပြီး၊ သူတို့ကို​နေ့လည်ဖက်တွင်​တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။
Finally, I took an interest inatrio of rather healthy looking amphibians which I noticed within days of each other close to my Pun Hlaing Apartment.
When I wasayoung boy back in England my friends and I spent endless summer evenings and weekends scouring ponds and forests for frogs and toads which much to our Mother’s annoyance we used to collect and take home to keep as pets and seeing them again while I’m living and working in Asia always brings back feelings of nostalgia.
Asian Black-Spined Toad နောက်ဆုံးမှာ ကျွန်တော် amphibians လို့ခေါ်တဲ့ကုန်းနေရေနေသတ္တဝါလေးတွေကို စိတ်ဝင်စားလာတယ်။ကျွန်တော်နေတဲ့ ပန်းလှိုင်တိုက်ခန်းနဲ့ အနီးအနားမှာ အဲ့ အကောင်လေးတွေရှိတာ သတိထားမိတယ်။ ကျွန်တော်ငယ်ငယ်တုန်းက အင်္ဂလန်မှာဆို သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ နွေရာသီညနေခင်း ပိတ်ရက်တွေမှာ ရေကန်တို့ တောထဲတို့ကိုသွားပြီး ဖား၊ ဖားပြုတ်တို့ကိုဖမ်းလေ့ရှိတယ်။ အမေဆိုကျွန်တော်တို့ကို အရမ်းစိတ်ညစ်တာ။ အဲ့ အကောင်လေးတွေကို အိမ်ကို ခေါ်လာပြီး အိမ်မွှေးတိရစ္ဆာန်အဖြစ်မွေးလေ့ရှိလို့။ အခုကျွန်တော် အာရှမှာလာနေပြီး အလုပ်လုပ်တဲ့ အခါ အဲ့အကောင်လေးတွေကို ပြန်တွေ့ရတော့ ငယ်ဘဝကို သတိရမိတယ်။
Burmese Whipping Frog
The Rice Field Frog goes by numerous names but this one is my personal favourite. Throughout SE Asia these little frogs are often consideredadelicacy and can often be seen for sale in wet markets or street food carts.
Luckily for this chap I’d already had my bacon & eggs so left him meandering through the grass verge searching for crickets 😉 As always, submissions can be sent to me directly at -
Rice Field Frog ကို အမျိုးမျိုးခေါ်ကြတယ် ဒီနာမည်ကတော့ကျွန်တော့်အကြိုက်ပဲ ။ အရှေ့တောင်အာရှမှာ ဒီဖားလေးတွေကို အရသာအရမ်းရှိတယ်လို့ သတ်မှတ်ကြတယ်။ တစ်ခါတစ်လေ ဈေးတွေမှာ (သို့) လမ်းဘေးကအစားအသောက်တန်းတွေမှာ ရောင်းတာတွေ့ရတတ်တယ်။ အခုတော့ဒီအကောင်လေးကံကောင်းသွားတယ်.. ကျွန်တော်က ဘေကွန်နဲ့ ကြက်ဥစားပြီးသွားပြီဆိုတော့ ဒီအကောင်လေးကို သူ့အစားအစာဖြစ်တဲ့ ပုရစ်လေးတွေရှာဖို့ပဲ ထားလိုက်တော့မယ်။
Going Wild စိတ်ဝင်စားသူတို့ တင်ပြချက်များ jonathanskipper@yomaland.com သို့ပို့နိုင်ပါတယ် ။ Join us again next month for the December edition of GOING WILD.